Banyere Anyị - LAIZHOU SANTA BRAKE CO., LTD
Ụlọ ọrụ LAIZHOU Santa BRAKE CO., LTD
Santa breeki bụ ụlọ ọrụ enyemaka nke China Auto CAIEC Ltd, nke bụ otu n'ime nnukwu ụlọ ọrụ ụgbọ ala na China.
Ụgwọ nke ụlọ ọrụ Laizhou Santa Brake Co., Ltd e guzobere na 2005. Santa breeki bụ ụlọ ọrụ enyemaka nke China Auto CAIEC Ltd, nke bụ otu n'ime nnukwu ụlọ ọrụ ụgbọ ala na China.
Santa breeki na-elekwasị anya n'ichepụta akụkụ breeki, dị ka diski breeki na drum, breeki na akpụkpọ ụkwụ maka ụdị ụgbọ ala niile.
Anyị nwere ntọala mmepụta abụọ dị iche iche. Maka diski breeki na drum mmepụta ihe dina na obodo Laizhou na nke ọzọ maka breeki na akpụkpọ ụkwụ na obodo Dezhou. Na mkpokọta, anyị nwere ogbako ihe karịrị 60000 square mita na ndị ọrụ nke ihe karịrị 400 mmadụ.
MGBE afọ 2005
Mba nke ndị ọrụ
Ewu ụlọ mmepụta ihe
Ego ịre ahịa na 2019
A na-eji ihe nrụpụta ihe nrụpụta breeki nwere ahịrị mmepụta DISA anọ, ụdị ọkụ asatọ nke ọkụ asatọ, igwe na-akpụzi kwụ ọtọ, Sinto Automatic Filling Machine na Japan MAZAK breeki diski ahịrị, wdg.
Ejiri ihe nrụpụta breeki na-ebubata akpaka ikuku mgbe niile & sistemu ngwakọta iru mmiri, igwe ablation, igwe nri jikọtara ọnụ, ahịrị ịgbasa na akụrụngwa ndị ọzọ dị elu.
Mgbe ihe karịrị 15 afọ mmepe, anyị ngwaahịa nwere ike izute mba àgwà ọkọlọtọ na-exported na ọtụtụ ógbè n'ụwa, dị ka USA, Europe, Canada, South America na Australia, na a ngụkọta ntụgharị karịa 25millions. Ugbu a, breeki Santa nwere aha ọma na China na ná mba ọzọ.
Ahụmịhe karịrị afọ 15 n'ichepụta akụkụ breeki.
Nnukwu oke na-ekpuchi ụdị ụgbọ ala na MOQ na-agbanwe agbanwe nabatara
Ịzụta otu nkwụsị maka akụkụ breeki niile ị chọrọ.
Ọnụahịa kacha mma ị nwere ike ịhụ na China
Anyị nwere TS16949 maka breeki diski anyị na sistem n'ichepụta mpe mpe akwa. N'otu aka ahụ, anyị nwere asambodo dị mma dị ka AMECA, COC, LINK, EMARK, wdg, maka ngwaahịa anyị.
Kwa afọ, anyị na-aga ọtụtụ anụ ụlọ na mba ọzọ ngosi, dị ka Automechanika shanghai, Canton ngosi, APPEX, PAACE, wdg Ya mere, anyị nwere ike mara anyị ahịa' ina ọzọ nke ọma na-enweta kpọmkwem nzaghachi si ahịa. Mgbe ahụ, anyị maara ka anyị ga-esi nyere ndị ahịa anyị aka kacha mma.
A na-anabata gị nke ọma ileta ụlọ ọrụ anyị ma kwado anyị! Ajuju ọ bụla, biko kpọtụrụ anyị! A ga-eji obi ụtọ na-emeso gị ma nweta nkwado mmeri na Santa breek!
Ngwaahịa na-ekpo ọkụ - map saịtị breeki drum volvo, Ụgbọala akpụkpọ ụkwụ breeki, diski breeki, mpe mpe akwa breeki akpaaka, Pads breeki na-arụ ọrụ, Ụgbọ ala breeki,